Half of Hotels and Tour Companies May Collapse Unless Situation Improves | Myanmar Business Today
HomeBusinessHalf of Hotels and Tour Companies May Collapse Unless Situation Improves
Half of Hotels and Tour Companies May Collapse Unless Situation Improves
If the situation does not improve in the next six months, 50 percent of hotels and 70-80 percent of tourism business may not be able to survive, U Tin Let, Deputy Minister of the Ministry of Hotels and Tourism, said during the National Tourism Development Committee’s meeting.
If they collapse, around 75,000 people directly employed by those businesses, and the other 75,000 people indirectly employed as well as their families will suffer the hit. The deputy minister said that his ministry will work with other related ministries to mitigate the impact in line with the ministry’s COVID-19 Myanmar Tourism Relief Plan as part of the country’s COVID-19 Economic Relief Plan.
The ministry estimate that the occupancy rate will be around 30 percent because the economic impact of the COVID-19 will significantly reduce consuming power.
Even if the country relaunches the tourism industry by now, it will take, U Tin Let estimate, up to six months to receive first foreign visitors because travelers often prepare their trips six months in advance. Therefore, the tourism industry needs to rely on local travelers at the moment.
A total of 1,255 hotels and motels, representing nearly two-thirds of the total hotels and motels in the country, have reopened per approval from the Ministry of Hotels and Tourism.
The earliest month to receive foreign visitors will be September. However, there is no confirm booking as there is no certainty on when the airports will reopen and flights will resume, or how long visitors need to stay in quarantine centers
Over 300,000 foreign visitors entered the country in June last year compared to 9,763 in June this year. 441 of them entered the country with relief flights while 9,322 entered through border gates on business matters.
The country has extended the suspension of international airports until July 31 and there is no scheduled flight except relief flights.
COVID 19 ကြောင့် ယခုအခြေအနေအတိုင်း ဆက်သွားမည်ဆိုပါက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်းနှုန်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ ၇၀−၈၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် နောက် ၆ လအထိ တောင့်မခံနိုင်ဘဲ ပိတ်သိမ်းသွားမည့် အနေအထားဟု ယူဆရကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးတင်လတ်ကပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ပိတ်သိမ်းသွားရမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းတွေက တိုက်ရိုက် အလုပ်ပေးထားသူ ၇၅၀၀၀ခန့်နှင့် ဆက်စပ် အလုပ်အကိုင် ရသူ ၇၅၀၀၀ခန့်၊ စုစုပေါင်းပေါင်း ၁သိန်းခွဲနှင့် ၄င်းတို့ရဲ့ မှီခိုမိသားစုများအပေါ် လူမှုရေး စီးပွားရေးအရ ရှိလာမည့် ထိခိုက်မှုများ သက်သာနိုင်သမျှ သက်သာစေရန် နိုင်ငံတော်၏ CERP COVID 19 Economic Relief Plan ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် COVID 19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဝန်ကြီးဌာနက တင်ပြထားသော COVID 19 Myanmar Tourism Relief Plan တို့နှင့်အညီ လိုအပ်သော ကုစားမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်စပ်၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးတင်လတ်ကပြောကြားသည်။
COVID 19 ကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု များကြောင့် consuming power လျော့နည်း မည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းခရီးသွားကြောင့် အခန်းငှားရမ်းရမှုသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပတ်၀န်းကျင်သာဖြစ်မည် ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်း ၄င်းကပြောသည်။
ပြည်ပခရီးသွားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၄င်းတို့၏ ခရီးစဥ်ကို ၆ လ ကြိုတင် ပြင်ဆင်လေ့ရှိသောကြောင့် booking စရသောအချိန်မှ နောက် ၆လ ကြာမှ ပြည်ပခရီးသွား စတင်မည်ဟု ခန့်မှန်းပါက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသည် ယခုကာလအတွင်း ပြည်တွင်းခရီးသွားကိုသာ မှီခိုရမည့်အနေအထားဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး ကပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အစစ်ဆေးခံပြီး social distancing ဖြင့် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နေသော ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်း ၁၂၅၅ ရှိလာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ၃ပုံ ၂ပုံနီးပါး ပြန်ဖွင့်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းခရီးသွား ဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုသည် နေရာကို လိုက်၍ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာရှိနေပြီး ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများအနေဖြင့် အပြည့်အဝမဖွင့်နိုင်ဘဲ အခန်း ၄ပုံ ၁ပုံကိုသာ ၀န်ထမ်း အလုပ်ရှိရန်ဖွင့်လှစ်နေသောအနေ အထားဖြစ်သည်။
အစောဆုံး ပြည်ပဧည့်သည် ပြန်လည် ၀င်ရောက်ရန် မျှော်လင့်နိုင်သော အချိန်သည် စက်တင်ဘာလ ဖြစ်သော်လည်း လေဆိပ် ပြန်ဖွင့်မဲ့အချိန်၊ လေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်လည်ပြေးဆွဲမည့်အချိန်တွင် တောင်းခဲ့မည့် Quarantine တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ ဖြေကြားနိုင်သော အနေအထား မရှိသေးသောကြောင့် firm booking လက်ခံရရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်းလည်းသိရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မနှစ်က ဇွန်လတွင် ပြည်ပခရီးသွား ၃သိန်းကျော် ၀င်ရောက်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လတွင် ပြည်ပခရီးသွား ၉၇၆၃ ဦးသာ ၀င်ရောက်ခဲ့ကာ လေဆိပ်မှ rescue flight ဖြင့် ၀င်ရောက်သူ ၄၄၁ ဦးနှင့် နယ်စပ်ကလုပ်ငန်းဖြင့် ပတ်သက်၍ ၀င်ရောက်သူ ၉၃၂၂ ဦးရှိကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်များ ပိတ်ထား ခြင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့် ထားခဲ့ပြီး Rescue Flight များအပ ဒေသတွင်း schedule flight များလည်း ပျံသန်းခြင်း မရှိသေးသောကြောင့် ပြည်ပခရီးသွားကို ဉီးတည် ချက်ထားသော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများသည် လုံး၀နီးပါးရပ်ဆိုင်းနေသော အနေအထား ဖြစ်ပသည်။
Previous articleMIC Approves $115 Mln Project in Tanintharyi Region
Next articleTax on cigarette and liquor planned to raise